Ahụkarị efere nke Japan | Akụkọ njem
Ahụrụ m ya n'anya Nri ndị JapanỌ bụ ihe na-amasị m nke ukwuu mgbe ọ bụla m na-eme njem na, ruo oge ụfọdụ ugbu a, n'obodo nke m. Ma ọ bụ na ka oge na-aga, nri ndị Japan ndị ọzọ ghọrọ ewu ewu na mgbakwunye na sushi.
Ya bụ, n'ihe gbasara ahụkarị efere nke Japan Ọ bụghị ihe niile metụtara sushi. Enwere ọtụtụ nri dị ụtọ! Ya mere, ọ bụrụ na ị nwere ike ịga njem ma ọ bụ chọta ezigbo ụlọ oriri na ọṅụṅụ Japanese na obodo gị, egbula oge. Ịgbalị ka ekwuru!
1 Nri Japanese
6 Shabu - acha
8 Curry Japanese
Nri Japanese bụ ihe ochie na ọ bụ nri na isi ọ dabere na osikapa, azụ, ọkụkọ na anụ ezi. N'ezie, a na-agbakwunye noodles na nha nha, n'ụdị ụfọdụ, na ísì ụtọ na ụtọ dị nnọọ iche na nke anyị na-emebu.
Sushi ghọrọ onye a ma ama ọtụtụ afọ gara aga, mana ọ dị anya ịbụ onye na-egosipụta nri ndị Japan kacha mma. Echetara m na m na-akwa akwa na ọ bụ naanị ụdị efere a ka a ga-eri n'obodo m afọ 20 gara aga, mgbe m si na njem mbụ m gara Japan lọta ma chọọ ịnọgide na-eri ramen na soba na yakitori na ihe ọ bụla ọzọ… Lee nkụda mmụọ!
Mana ọ dị mma ugbu a, nri ndị Japan kwa ụbọchị dị nso. Ka anyị hụ mgbe ahụ efere a na-ahụkarị.
ahụrụ m nke a n'anya nri ma ọ bụ ihe m na-akwụsịghị ịzụrụ ya konbini, ụlọ ahịa dị mma nke na-ejupụta square mita ọ bụla nke obodo Japan ma ọ bụ ebe ọ bụla.
Ọ bụ ụdị sanwichi osikapa na njuputa dị iche iche: ọ nwere ike ịbụ ọkụkọ, anụ ezi, akwụkwọ nri, tuna ... A na-ejikarị osikapa eme ihe na mgbe ụfọdụ enwere mpempe akwụkwọ nke ahịhịa mmiri na-ekpuchi ya. Bọọlụ osikapa ahụ bụ okirikiri ma ọ bụ triangular n'ụdị.
A na-ere ha dị ọhụrụ na ọnụ ala.
Taa na Anụ Mmịkpọ Korean, aka na k-dramas, ma ndị Japan nwere ụdị nke ha: yakiniku. Iberibe anụ ahụ dị ezigbo mma ma ọ ga-ekwe omume ịnweta ya gụnyere wagu, anụ ahụ mara abụba bụ́ nke e ji kpọrọ ihe ma dị oké ọnụ n’ala ndị a.
Mkpụkpọ anụ dị ntakịrị ma a na-eji ihendori dị iche na barbecue kpochapụwo.
Nke a bụ ụdị noodles dị iche iche na-ewu ewu nke ukwuu. Nke afọ ọhụrụ A na-esi na ọka wit mee ha, a na-ejikwa ihendori ha rie ha iche. Ya mere, ị na-agba ha mmiri tupu etinye ha n'ọnụ gị.
Ọ bụ nri dị mfe nke a na-ejikarị chives na ahihia mmiri eme ihe, a na-erekwa ya n'ụlọ ahịa ndị ọkachamara na soba ma ọ bụ udon. N'ụlọ oriri na ọṅụṅụ ọdịnala, ọ naghị adịkarị ụkọ.
Nke a bụ a ngwa ngwa efere ma dị iche iche na ị nwere ike ịtụ ọdụ ịnọdụ ọdụ n'ụlọ mmanya nke otu n'ime obere ụlọ oriri na ọṅụṅụ ndị Japan. N'izugbe, a na-eji yakitori eme ya iberibe ọkụkọ, dị iche iche ịkpụ, na biya bụ ụlọ ọrụ kacha mma.
Na yakitori, a na-eji ọkụkọ eme ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe niile n'ihi na mgbakwunye na anụ ahụ ha na-eri akụkụ ahụ ma ị nwere ike ịtụ ha nri dị iche iche, ụtọ, ụtọ na utoojoo, nnu ... E nwere ụdị yakitori na-ewu ewu karịa ndị ọzọ, dịka ọmụmaatụ Negima, momo ma ọ bụ tsukune.
Shabu - acha
Ọ bụrụ na ị na-aga na oyi na oyi na-atụ dị mma stew ọ kacha mma na nke ahụ bụ ihe shabu shabu bụ maka nri na ọtụtụ ibe anụ na akwụkwọ nri sie na ofe na ihendori. Ọ bụghị efere dị arọ, kama nke ahụ, ọ dịkwa mma maka ọnụọgụ akwụkwọ nri ọ nwere.
Shabu shabu bụkwa nri ọha mmadụ na-enwekarị ebe ọ bụ na a na-agbakọta na gburugburu ite ahụ, nke na-aga n'ihu na-ekpo ọkụ na obere okpomọkụ, mgbe ọ na-ekwu okwu ma na-apụ apụ.
Echere m na nke a bụ nri kacha amasị m. Ọ bụ maka a pancake emere ya na ntụ ọka, mmiri na akwa etisara nke a na-esi n'ọkụ na-ekpo ọkụ nke ukwuu ma nwee nke dị ọcha kabeeji ma ọ bụ nke a kpụkọrọ akpụkọ. Otu n'ime ụdị efere a kacha ewu ewu bụ okonomiyaki from Hiroshima, yabụ ọ bụrụ na ị gaa ijegharị n'obodo a, gbalịa ka ị ghara ichefu ịnwale ya. Ma n'ezie enwere ụdị ndị ọzọ na ọ dịghị mkpa ịga Hirosihima iji nwee obi ụtọ.
Mpaghara ọ bụla na-eji ihe dị iche iche eme ihe na-eme ka okonomiyaki ụtọ dị iche iche n'ebe ọ bụla. Ma ọ dịghị ọnụ ma ọlị, ọ na-aba ụba ma na-atọ ụtọ nke ukwuu.
Ọ bụrụ na enwere ihe ị na-agaghị ezere mgbe ị na-eje ije na Japan, ọ bụ inwe ísì ụtọ nke curry Japanese. Karịsịa n'oge nri ehihie. Onwe m, echere m na ọ na-eju ntakịrị ma ọ bụrụ na ịchọghị ya, iwe na-ewe gị, mana ọ bụ ihe nchịkọta ehihie nke ehihie. dị mgbe niile na ebe ọ bụ na ọ na-ewu ewu ị nwere ike ịchọta ọnụ ahịa dị iche iche.
Curry n'onwe ya siri ike, mgbe niile ọ bụ ngwakọta nke ngwa nri na e nwere curries na India, Sri Lanka, Thailand ... Ebe a na Japan curry na-aga site na a. efere anụ na akwụkwọ nri jikọtara na nnukwu ihendori gbara ọchịchịrị. Na osikapa, n'ezie. N'ime nsụgharị niile kachasị ewu ewu bụ karyu curry nke gụnyere anụ bred na e ghere eghe, nke nwere ike ịbụ anụ ezi ma ọ bụ ọkụkọ, osikapa n'akụkụ na ọtụtụ ihendori curry.
Ọ bụ efere dị arọ, yabụ ọ bụrụ na ị na-eso ya na iri biya, ị chọghị ịga ọzọ ma emechaa.
Tempura bụ isi nri eghe N'uche nke m, a ghaghị ime ya nke ọma na mmanụ dị mma. Enwere nna ukwu nke tempura yabụ ọ bụrụ na ị nwere akwụkwọ akpa, ị kwesịrị ịkwụ ụgwọ maka ụdị kacha mma. The tempura gụnyere akwụkwọ nri na azụ yabụ ị nwere ike iri oporo, karọt, poteto dị ụtọ, ugu… n'ezie, ndepụta ahụ enweghị njedebe.
The tempura na-aga aka na nnukwu ihendori, nnu na mgbe ụfọdụ osikapa. Ị nwere ike iji noodles tụọ ihe mana ụdị a na-ahụkarị bụ tempura naanị. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịnwale ezigbo tempura wee gbalịa ịga na a tempura ya, ma ọ ga-efu gị ihe dị ka 50 euro ma ọ bụ karịa ... Na izakaya ọ dị ọnụ ala, n'etiti 6 na 20 euro na maka onye ọ bụla evasions ị nwere ike ịga na nnukwu ụlọ ahịa ebe ndị ahịa na-dị ọnụ ala karịa.
Nri ọkacha mmasị m nke abụọ? Mgbọrọgwụ nke efere a kwesịrị ịbụ ndị China, mana n'oge a ọ dịghị onye Japan na-ahụghị efere a nke ghọrọ nnukwu Japanese. Enwere ọtụtụ ụdị ramenEnwere ụdị, ụtọ, nwere ihe dị iche iche ịhọrọ.
Dịka ọmụmaatụ, nke tonkotsu ramen A na-eme ya site na ọkpụkpụ anụ ezi ma na-ewu ewu nke ukwuu. Nke bụ eziokwu bụ na ị nwere ike ịnwale ụdị niile n'amaghị ihe ị na-arịọ. Egbula azụ, ha niile na-atọ ụtọ. Ọ dịtụbeghị mgbe m detụrụ broth dị ụtọ nke ukwuu, na-atọ ụtọ nke ukwuu, yana ihe ụtọ dị iche na nke ọkụkọ ma ọ bụ efere akwụkwọ nri nke mmadụ na-eri n'ụlọ.
Ọfọn, na ndepụta nke ahụkarị efere nke Japan ị nwere ike ọ bụghị ebe ịchụàjà sushi, kpochapụwo Nchikota osikapa na azụ. Enwere ọtụtụ ebe ị nwere ike iri sushi, mana a bịa n'ihe gbasara ibi ndụ otu ahụmịhe, ihe kacha mma bụ ịga otu n'ime ụlọ oriri na ọ restaurantụ restaurantụ ndị ahụ nwere band sushi na-emegharị emegharị. Nke "Sushi na-atụgharị»Ọ bụ ihe na-atọ ụtọ ma na-eme ka ahụmahụ nke iri ihe na-echefu echefu.
Ma ọ bụrụ na ịchọghị ịga rie sushi, mgbe ahụ na nnukwu ụlọ ahịa ma ọ bụ na konbini ị nwekwara ike ịhụ ha.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Asia njem » Japan » Nri a na-ahụkarị nke Japan